हितैषी साथी-द्वारा जागरुकता कार्यक्रम - खबरम्यागजिन
सञ्जीव मोहोरा, सोनादा १० जुन
ग्राम विकास समिति नेहुर बालासन क्षेत्रका एक सामाजिक संस्थाले आज एउटा जागरुकता कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यो। यहाँको नेहुर बालासन प्राथमिक पाठशाला भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा श्रम विभाग, अल्पसंख्यक,वृद्ध भत्ता,दिब्याङ पर्यावरण, भविष्य निधि अनि रुपाश्री प्रकल्प जस्ता योजनाहरुबारे दार्जीलिङका एक गैरसरकारी संस्था “हितैषी साथी “बाट आएका स्वयंसेवकहरु हेमलता सुब्बा निमा ल्हमु तामाङ,निर्मला राई , जया राई ,टि टि भोटिया,एन.के. सिंह ,किरण राई र शकुन्तला मोक्तानले जानकारी दिए।
शकुन्तला मोक्तानले निपाह वायरसबारे बताइन्। निर्मला राइले सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गरेको मातृ यान वाहनबारेमा बताइन्। शरीर सम्बन्धि विभिन्न प्रकारको सफाइबारे निमा ल्हमु तामाङले बताइन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भएका कतिपय अल्पसंख्यक समुदायहरुले सरकारबाट विभिन्न प्रकारको ऋणहरु कम्ती ब्याजमा पाउनेबारे बताउँदै यसको निम्ति अल्पसंख्यक समुदायका नानीहरुले ५०% अङ्क ल्याउन पर्ने जनाइन्।
हेमलता सुब्बाले वृद्धा भत्ता, दिब्याङ, रुपाश्री प्रकल्पबारे बताइन्। नन्द कुमार खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न आजको जनचेतना कार्यक्रममा ग्राम बिकास समिति बालासनका दुर्गा राई,एम बि तामाङ,अशोक गुरुङ,दीपक तामाङ,एस.के. चाम्लिङ ,रन्जु तामाङ,रोश्ना तामाङ,डि के देवान,भुपेन तामाङ,रेजिना तामाङ,लगायत रेलिमाइ समाज र सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो।
नन्द कुमार खड्काले गैरसरकारी संस्थाको औचित्यबारे पनि प्रकाश पारे। कार्यक्रम लोकेश स्याङ्बोले सञ्चालन गरेका थिए।